Coffee ee dhadhanka ayaa soo saartay galay dhowr ah oo kala duwanaansho kale oo ay ka mid, doortaan wixii ku baabbi'iyee in ugu dambeyntii heli aad is mararka qaarkood waxa laga yaabaa in shaqo overpowering. Laakiin guryaha bunka dhici in la caawiyo macaamiisha keentay fudud in ay qoraan liiska cabitaanka kafeega la heli karo, ay qaado ugu wanaagsan ee cuntada kafeega cabitaanka dhaba.
Waxaad ka heli kartaa noocyada kala duwan ee Java ah oo aad iyo mid kale oo kala duwan ayaa kaa caawin kara. Waxaa jira Coffee oo joogto ah, Coffee Instant, java, Cappuccino, Milk, Mocha, Maraykanka, oo ku garaaca.
Espresso Normal – Kaliya u baahan-biyo kulul iyo badar ka kafeega. Taasi waxaa milmay iyo in ay aqbalaan agagaarka daqiiqad ka hor waxa u baabba'o. Marka laga soo tago in, caadiga ah kafeega sidoo kale noqon kartaa caddaan ama madow oo keliya. Kafeega Dark ma laha daro oo dheeri ah in ay, halka kafeega cad lagu qasi karaa iyada oo cream yar ama caanaha. Ku darista glucose labada kala duwanaansho kale oo uu noqon doonaa ku tiirsan tahay shakhsi ahaaneed doorashada.
Coffee Degdeg ah – Isticmaali kafeega in uu yahay maddow ama budada ah. Tani waa cabitaan habboona kuwa doonaya in ay sameeyaan ay koob oo bun fudud oo degdeg ah si aad u (muddo yaynana kolna in mar dambe in ay galaan waa). Waxaad u baahan doontaa oo kaliya ay leeyihiin tani dhakhso leh wax cabbay iyo inay dhexgalaan budada.
Java (asalkiisu ka soo jeedo ee Italy) – Kafeega Java waxba isticmaalaa laakiin kafeega cajiib ah oo ah isu-gaynta kafeega in ay ka duwan yihiin. Cabbitaan Tani waxay u dhaxayn kartaa madow, dhexdhexaad, in kafeyin iyo sidoo kale leeyahay dhadhankii oo kala duwan.
Cappuccino – Cabitaanka kafeega Tan waxaa ku jira sawirka Java iyo waxa caadi ahaan dahaarka caano xumbaynaysa on top (waxay kaa caawin kartaa kooban kulaylka ah), oo ah faafinta budo yar ka xawaashka.
Cappuccino (caanaha ee Talyaaniga) – Nooc espresso ah in uu si caadi ah u sameeyey caano oo la caadka (sidoo kale bixisaa caanaha xumbaynaysa on top waxaa ka mid ah) . Markaas dari caanaha, sidaa darteed haddii aad rabto in aad fizz xoogga dhadhanka qaxwaha oo hoos. Laakiin waa in aad u jeclaan lahaa hab kale oo ku xeeran, kaliya ku dar laba-darbo Java in aad Latte gaar ah.
Mocha (asalkiisu ka soo jeedo ee Yemen) – Ugu horrayn sameeyey oo digir ah. Waxaa intaa dheer, waxa la barbar dhigi karaa cabitaan cappuccino ama Cappuccino ah, laakiin wax ka mid ah version ah u gooyeen waa. Waxaa sida caadiga ah lagu daray, sharoobada ama budo yar kulul shukulaatada.
Maraykanka (isticmaalaa bunka) – Marka la dalbanayo Americano ah, saadaaliyaan in la kaliya hal shuut ah caffeine, aad doonaysid in aad la cabeyso in ay biyo kulul weliba waa inuu ku (dabiiciga ah ee Java la sameeyo iyadoo la isticmaalayo biyo aad u xoog badan ka yar).
Strike – , Waa sidaas oo ah espresso cabitaanka ee qaboojiyaa version. Waxaa sida caadiga ah qaso qaarkood baraf burburiyo, glucose, qaxwaha, lotion, iyo biyo.